ကြက်သားကင်ပေါက်စီ | Wutyee Food House
စားချင်စဖွယ် ငါးခူကြော် »
January 24, 2010 by chowutyee
မနက်စာအဖြစ် ပေါက်စီကို အစားများကြပါတယ်။ အများစုက ပေါက်စီကို အိမ်မှာလုပ်မစားပဲ ၀ယ်စားကြတာ များပါတယ်။ ၀တ်ရည်ကတော့ အပြင်က၀ယ်စားတာထက် အိမ်မှာလုပ်စားတာ ပိုနှစ်ချိုက်တယ်။ ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ အစားပလာတွေ ထည့်လို့ရတယ်။ အရသာလည်း မတူဘူး ပိုစားကောင်းတယ်။ ဘယ်သူမဆို အိမ်မှာ ပေါက်စီကို လုပ်စားနိုင်အောင် တင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပေါက်စီ ဒိုးတွင် ပါဝင်သောပစ္စည်းများ (CityMart ဆိုင်တွင် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်)
၁။ ပေါက်စီလုပ်သည့် ဂျုံ (low-gluten flour) – ၁၂၀ ဂရမ်
၂။ Double Action Baking Powder – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၃။ Instant Yeast – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၄။ သကြား (Castor sugar) – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၅။ Shortening – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
(မှတ်ချက်။ ။Shortening ၀ယ်မရလျှင် ဟင်းရွက်ဆီကိုသုံးပါ)
၆။ ရေ – ၁နို့ဆီဘူး တ၀က်
၁။ ကြက်ရင်ဗုံသား – ၁၅ကျပ်သား (ကင်ပြီးသား)
၂။ သကြား – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
၃။ ပဲငံပြာရည်(အနောက်) – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၄။ ရေ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၇ဇွန်း
၅။ နှမ်းဆီ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၇။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၈။ ကြက်သွန်နီ – ၂လုံး ( ၈စိပ်စိပ်ပါ)
၁။ ကြက်သားကို barbecue ဆော့(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ကြက်သားမှုန့် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ဆီအနည်းငယ်ထည့်၍ 0ven ဖြင့် မိနစ်၃၀ခန့် ကင်ပေးပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ဒယ်ထဲ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း)ထည့်ပြီး အစာသွပ်တွင် ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းအားလုံးကို ထည့်မွှေပေးပါ။
၃။ အစာသွပ်ရန် ချက်ပြီးလျှင် ဒိုးကို စလုပ်ရမည်။
၁။ ဒိုးလုပ်ရာတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းအားလုံးကို ရောနုယ်လိုက်ပါ။ ဒိုးကို နာနာနုယ်ပေးပါ။ ဒိုးအနေထားသည် ချောမွတ်သော အနေထားတွင် ရှိနေရမည်။
၃။ ထို့နောက် အစာသွပ်ရမည့် အသားများကို အလုံးလုံး၍ ဒိုးပြားထဲထည့် ပေါက်စီပုံဖော်ပါ။
၄။ ပေါက်စီအောက်ဘက်ကို ဆီအနည်းငယ်သုတ်ပြီး ပန်းကန်လုံးတစ်ခုထဲထည့်ပါ။ ရေစွပ်ထားသော အ၀တ်ဖြင့် အပေါ်မှ ၂နာရီခန့် အုပ်ထားပေးပါ။
၅။ ပေါက်စီ ၂ဆကြီးလာပြီးဆိုလျှင် အပူခံ ပန်းကန်ပြားထဲထည့် ပေါင်းအိုးထဲ ၁၀မိနစ်ခန့် ထည့်ပေါင်းပေးပါ။
၆။ အရသာထူးခြားသော ကြက်သားကင်ပေါက်စီကို ပူပူနွေးနွေး စားသုံးနိုင်ပါပြီး။
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 26 Comments
on January 24, 2010 at 12:57 pm | Reply နွေးနေခြည်
ပေါက်စီ ပုံဖော်ပုံ ကလှတယ်။ ဒါမျိုးလူတိုင်းမလုပ်တတ်ဘူး။ တော်တယ် သူငယ်ချင်း
on January 24, 2010 at 1:02 pm | Reply chowutyee
ကျေးဇူးပဲ သူငယ်ချင်း ;).. ငါ ပုံဖော်ပုံ အဆင့်ဆင့် ကိုသေသေချာချာရိုက်ပြီး နောက်တခါ တင်ပေးမယ်။
on January 25, 2010 at 10:07 am | Reply Hmone Gyi
wow my twin is extremely so clever…khl ka ta yae kha nay tal 😉 will try if i have some free time 😉
on January 25, 2010 at 10:23 am | Reply chowutyee
ံဟီးဟီး… ကိုယ်လုပ်စားပြီးရင် ပြန်ပြောအုန်းနော်… 😉
on February 6, 2010 at 8:26 am | Reply Ma Ei
ပေါက်စီ ပုံဖော် တာ အရမ်းတော်တယ်..။ အမ ကလဲ ဟင်းချက် တာ မုန့် လုပ် တာ ၀ါသနာ ပါ တော့ ညီမ ရဲ့site ကို ရတော့ အမ ၀င်ကြည့်ပြီး အားပေးသွားပါတယ်။ နောက်လဲ အားပေးနေမယ်နော်။
on February 6, 2010 at 1:53 pm | Reply chowutyee
ခုလို လာအားပေးလို့ ကျေးဇူးပဲနော် မမအိ.. 🙂
on February 17, 2010 at 3:51 am | Reply Snow
ရည်ရည် ပေါက်စီလုပ်ပြတော့ လွယ်သလိုပဲ။ အစ်မတော့ ဖက်ထုပ်လုပ်တာတောင် မလုပ်တတ်လို့ ခေါင်းအုံးပုံလုပ်ပြီး ထုပ်လိုက်ရတယ်။
အခုလို မျှဝေတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တစ်ရက်လောက် စမ်းလုပ်ကြည့်အုံးမယ်။
on February 17, 2010 at 4:36 am | Reply chowutyee
ဟဲဟဲ… ၀တ်ရည်လည်း ပထမဆုံး စမ်းလုပ်တုန်းကလည်း သိပ်အဆင်မပြေဘူး(ပေါက်စီပုံနဲ့ မတူပဲ ဘာနဲ့တူမှန်းကိုမသိတာ).. အဲဒါနဲ့ နောက်တစ်ခါမှ ထပ်စမ်းလုပ်မှ အဆင်ပြေသွားတာ.. စမ်းလုပ်ကြည့်ပါ အစ်မ.. အဆင်မပြေတာရှိလည်း ပြောပါနော်..း)
on February 19, 2010 at 7:45 am | Reply သဇင်
ညီမရေ shortening ဆိုတာ ဘာလဲမသိလို့ မေးကြည့်တာပါ ။
on February 19, 2010 at 8:30 am | Reply chowutyee
မသဇင် shortening ဆိုတာ ဟင်းရွက်ဆီ တို့နဲ့လုပ်ထားတာ။ Shortening အရောင်က အဖြူရောင်၊ ပြီးတော့ ဘာအရသာမှ မရှိဘူး.. သူက ပေါက်စီ၊ ပါမုန့် လုပ်တာတို့မှာ အသုံးများတယ်. မသဇင် မြင်သာအောင် သူပုံကိုရှာပြီး link တွဲပေးလိုက်တယ်။ http://www.joyfullyfit.com/images/shortening-all_vegetable-453-ss.jpg
on February 25, 2010 at 7:10 am | Reply KT
There is vegetable shorterning or animal shorterning. You can use “wet c” if there’s no shorterning in Burma.
on February 25, 2010 at 7:30 am chowutyee
၀တ်ရည်ပြောတဲ့ shortening ဆိုတာ Vegetable Shortening ကို ပြောတာပါ။.. Anyway
Not animal oil!!! Thanks for yours answering 😉
Shortening မြန်မာပြည်မှာ ရောင်းတာ မတွေ့ပါဘူး.. လိုက်စုံစမ်းတာလည်း နေရာနှံနေပါပြီး.. နိုင်ငံခြားမှာတော့ ၀ယ်နိုင်ပါတယ်.. Shortening အစား ဟင်းရွက်ဆီသုံးနိုင်ပါသည်။း)
on February 25, 2010 at 7:11 am | Reply KT
Or just Vegetable oil if you don’t like “wet C”
on February 26, 2010 at 5:46 pm | Reply သဇင်
ကျေးဇူး ညီမ ၀တ်ရည။် ပုံလေးတွဲတင်ပေးတာ ။ 😀
အမ အထင်တော့ ဒီက supermarket ထောပတ်တန်းမှာ ရှိလိမ့်မယ်… pastry မုန့်တွေမှာ ထည့်တာမျိုးနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတယ်…
Also thanks to KT for your info. 😉
on May 6, 2011 at 4:50 am | Reply Myint Myint Wai
Poa Skin become yellow colour after I steamed. Why? Because of type of flour? Please can you reply to me by mail.
၀တ်ရည် စိတ်ထင် baking powder ထည့်တာများသွားမျိုး ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။ မဟုတ်ရင် ပေါက်စီက မ၀ါပါဘူး။ ဂျုံကတော့ ပေါက်စီလုပ်တဲ့ ဂျုံက ပိုအိပြီ စားလို့ပိုကောင်းပါတယ်.. ထပ်လုပ်စားကြည့်ပါအုန်းနော်..
on June 4, 2011 at 3:32 pm | Reply thar lay
ကျွန်တော်က တော့ ဒီနေ့ 
၀တ်ရည်လည်း ပေါက်စီဆို အ၇မ်းကြိုက်ပဲ။ အိမ်မှာ လုပ်စားရတာ ပိုတောင်ကြိုက်သေးတယ်.. ကိုသားလေးကိုလည်း ကျေးဇူးပါ..
on June 26, 2011 at 3:30 am | Reply Gar Field
ကောင်းလိုက်တာ ဒီလိုမျိုးတွေ တင်ထားလိမ့်မယ်လို့ မထင်မိဘူး မြန်မာလိုရေးထားတာတွေဆိုတော့ အရမ်းအသုံးတည့်တယ် ကျေးဇူးပဲ
on November 27, 2011 at 4:34 am | Reply Eaindray Oo
မမရေ ညီမ လုပ်ကြည့် တာ ပေါက်စီ အခွံက မာနေတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မမ။
တခြားတော့ မချက်ကြည့်ဘူး။ ပေါက်စီက ကြိုက်လို့ စမ်းကြည့်တာ အခွံသား ကမာနေသလိုပဲ မမ။ ပြောပြ ပါအုံးနော်။အမှန်မတည့်လို့လားမသိဘူး။
ပေါက်စီလုပ်တဲ့ ဂျုံမှုန့် မသုံးထားလို့ ဖြစ်မယ်။ ပေါက်စီပုံပါတဲ့ ဂျုံမှုန့် သီးသန့်ဝယ်ပြီ ထပ်လုပ်စားကြည့်ပါနော် မ.. 🙂
on November 28, 2011 at 6:13 am | Reply chowutyee
When u do Paul Si, u need to add yeast
on February 9, 2012 at 2:38 pm | Reply fkthet
ပေါက်စီပုံပါတဲ့ ဂျုံမုန့်က ဘယ်မှာ ရနိုင်သလဲဟင်
on February 9, 2012 at 3:00 pm | Reply chowutyee
မ CityMart မှာ ၀ယ်လို့ရတယ်။ ရိုးရိုးဂျုံနဲ့လည်း လုပ်လို့တော့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် ပေါက်စီလုပ်တဲ့ ဂျုံက ပိုပြီ နူးညံ့ပြီ စားလို့လည်း ပိုကောင်းတယ်.. 🙂
on April 28, 2012 at 11:16 am | Reply Khin La Yaung
Instant Yeast ဆို ဘာကိုခေါ်တာပါလဲ။မသိလို့ပြောပြပေးပါနော်။
ပြီးတော့ ပဲပေါက်စီလုပ်နည်းလေးကိုလည်း သိချင်ပါတယ်။ဟင်းချက်နည်းတွေ ပြန်မျှဝေပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
on May 2, 2012 at 10:43 am | Reply chowutyee
Instant Yeast ကို City Mart မှာ ၀ယ်လို့ရပါတယ်.. ပဲပေါက်စီ လည်း နောက်ကျရင် တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်နော်.. ကျေးဇူး